Xukun adag oo lagu riday Sargaal Soomaali Mareykan ah Oo Dil Geestay (Sawirro) - Awdal Media
Xukun adag oo lagu riday Sargaal Soomaali Mareykan ah Oo Dil Geestay (Sawirro)
Maxkamad ku taal magaalada Minneapolis ee gobolka Minisota ayaa xabsi 12 sano iyo bar ah ku xukumay sargaal Soomaali Mareykan ah oo lagu magacaabo Maxamed Nuur oo lagu helay dilka haweeney u dhalatay dalka Australia.
Xeer beegti ka kooban 12-ruux ayaa isku raacay in Maxamed Nuur oo dil geestay, waxa ayna isku raaceen in lagu xukumo 12-sano iyo bar oo xabsi ah oo u dhiganta ciqaabta dilkii uu geestay.
Maxamed Nuur ayaa lagu helay in uu dilay Haweeney lagu magacaabo Ruszczyk Damond oo u dhalatay dalka Australia, waxa uuna dilka haweeneydan ka dhacay 15-kii July 2017-dii guri ay ku nooleed.
Askarigan Soomaali Mareykanka ayaa qirtay in uu dilay haweeney aan hubeysneyn, waxa uu xusay in cabsi lasoo daristay isaga iyo saaxiibkiis sidaasna uu ku furay rasaasta sababtay in haweeneydan ku geeriyooto.
Waxa uuna xeerbeegtida Maxamed Nuur u sheegay in uu rumaystay in ay halis ku soo wajahantahay markii uu maqlay dhawaq isla markaasna arkay Damond oo gacanteeda midig taagaysa.
Erdogan Oo Marqaati ka Noqday Arooska Ciyaartawga Caanka Ee Ozil.(Sawiro)
Daawo ONLF Oo ka Hadashay Rabshado Dad ku Dhinteen Ee Ka Dhacay Degmada Doolow.